लालबाबु पण्डितको आक्रोश : कर्मचारी र पत्रकारको पनि दसैँ भत्ता कटौती गरौं - Madhesh24
लालबाबु पण्डितको आक्रोश : कर्मचारी र पत्रकारको पनि दसैँ भत्ता कटौती गरौं
प्रकाशित मिति - कार्तिक ४, २०७७ मंगलवार
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले सांसदहरुको मात्रै चाडपर्व (दशैं) भत्ता कटौती गर्नु राम्रो नहुने बताएका छन् ।
अहिले सांसदलाई स्पेशल दसैं भत्ता दिएको होइन । राज्यले जे काट्ने हो, त्यो काटिहाल्छ । अर्कोतर्फ, जनता सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुसँग नै आश गर्छन् । दसौं जना पत्रकारले पनि फोन गरिसक्नुभयो- दसैं आयो, खर्च चाहियो भन्छन् । म निर्वाचन क्षेत्र पुगेर भर्खरै आएको छु, बिरामीहरुलाई खर्च दिएर ।बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा, सबै जनप्रतिनिधि एउटै स्तरका छैनन् । विनोद चौधरी र लालबाबु पण्डित दुवै जनप्रतिनिधि हुन् । एकैरुपमा तुलना गर्नुभयो भने जनप्रतिनिधिहरु अब ठूला-ठूला उद्योगपति, ठूला ठूला ठेकेदार र ठूला ठूला तस्करमात्रै जनप्रतिनिधि हुने भन्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, पत्रकारहरुले सबैलाई एकै डालोमा हालेर आफ्नो मिडियामा, पत्रिकामा जनप्रतिधिहरुलाई बदनाम गर्ने गरी जुन अभियान चलाइएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यही पत्रिकाले हो ६ वटा गाडी लिएर हिँड्छ लालबाबु पण्डित भनेर लेख्ने । लालबाबु पण्डितसँग गाडी छ ? लालबाबु पण्डितसँग घर छ ? म मोटरसाइकलमा हिँडिरहेको छु ।त्यसकारण मलाई लाग्छ, जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गरेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुदृढ हुँदैन । अपराध गरेको छ भने अपराधलाई दण्डित गर्नुपर्छ । तर, यहाँ व्यवस्थाविरुद्ध नै जाने गरी जुन अभियान चलाउन खोजिएको छ, जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गरेर त्यो ठीक भइरहेको छैन् ।
उसोभए सबैको काटौं । ‘सरकारी सेवा सुविधा लिने, सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी, पत्रकार, अन्य राष्ट्रयसेवक जो-जो छन्, सबैको कटौती गरौं र कोरोना कोषमा हालौं । यो निर्णयमा सबै सहमत हुन्छन् भने म सबैभन्दा अगाडि हुन्छु ।यसो गरियो भने शिक्षकको दसैं भत्ता काटिन्छ । आर्मी, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगमा काम गर्ने मजदुर र पत्रकारहरु सबै जोडिन्छन्, सबैको भत्ता काटिन्छ । यो मेरो प्रस्ताव हो ल ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय गलत छ, कानुनसम्मत छैन भने असुलउपर हुन्छ । गलत निर्णय भएर पाएको त निजामतिको भए पनि, प्राध्यापकको भए पनि, शिक्षकको भए पनि सबैको असुलउपर भइहाल्छ ।सांसदको सुविधासम्बन्धी ऐनमा दसैँ भत्ताको विषयलाई नराख्दा अहिले प्रश्न उठेको हो । अघिल्लो वर्ष मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपरेको पनि यही कारणले होला । अब ऐन नै संशोधन गर्न पहल गरौं जस्तो लागेको छैन ?
Tags: लालबाबु पण्डित
द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्न भ्रमणमा आएको छु : रक्षामन्त्री वेइ
चिनियाँ रक्षामन्त्री फेङ्हो भोलि नेपाल आउँदै
हामी देशव्यापी संगठन निर्माणको अभियानमा छौं
बलात्कारी लाई फाँसी दे भन्दै बगहाको युवाद्धारा प्रदर्शन